दार्जिलिङ-सिक्किम भारतमा यसरी गाभियो, अब नेपाललाई फिर्ता गर्ने आधार छैन् ? (भिडियो) Darpansansar News
दार्जिलिङ-सिक्किम भारतमा यसरी गाभियो, अब नेपाललाई फिर्ता गर्ने आधार छैन् ? (भिडियो)
काठमाडौं । कुनै समय थियो,नेपालको सिमाना पश्चिममा किल्ला,कागडा र पुर्वमा टिष्टासम्म थियो । आजभन्दा ६ दशकयता कहिले राष्ट्रिय गीत र कहिले कक्षागत गीतका रुपमा यो गीत गाउन लगाइन्थ्यो, ‘पश्चिम किल्ला कागँडा,पुर्वमा टिष्टा पुगेथ्यौं’ । तर आज हामीसँग त्यो नेपाल छैन ।
हामी मेची र महाकालीको सिमानामा खुम्चिएका छौँ । नेपाल र बेलायतबीच १८१६ मार्च ४ तारेखमा सुगौली सन्धि भएको २०१ वर्ष पुगिसकेको छ । दुई सय एक वर्षअघि नेपाली शासकको शिर तत्कालीन अंग्रेज शासकका सामु झुक्दा नेपालले मेची र महाकाली पारिको जमिन गुमाउनु परेको थियो ।
त्यतिबेला साँच्चिकै ग्रेटर थियो नेपाल । तर सन् १९४७ अगस्त १५ मा बेलायतबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालले गुमाएको उक्त भू-भाग नेपालको हुनुपर्ने माग नेपालमा उठेको वर्षौ भइसकेको छ ।
ग्रेटर नेपाल सबैको मनमा भए पनि यसले राष्ट्रिय बहसको रुप ग्रहण गर्न सकेको छैन । तर सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूमि फिर्ता हुनुपर्ने नारा बेलामौका नेपालमा पनि घन्किने गर्छ ।
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले सिक्किम, दार्जिलिङ नेपालमा फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने ग्रेटर नेपाल सम्भव छ । तर सत्तामा रहेका नेपालका राजनीतिक दलहरुले सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूमि फिर्ता हुनुपर्ने मागलाई हिम्मतका साथ उठाउन सकेका छैनन् ।
केही महिना अघि अनलाइनखबर डटकमसँग अध्यक्ष नेपालले अंग्रेजसँगको पराजय र सुगौली सन्धीको बारेमा केही ऐतिहासिक तथ्य खुलाएका छन् ।
यति नै बेला तराईपट्टिको इलाकामा अंग्रेजहरुसित नेपालको सीमा विवाद सुरु भएको थियो । बेलायतबाट व्यापार गर्न आएका अंग्रेजहरु भारतलाई उपनिवेश बनाएर बसेका थिए । त्यहाँ शासन सञ्चालन गर्न बेलायतले खडा गरेको थियो इष्ट इन्डिया कम्पनी ।
नेपालसित सीमा विवाद बढ्दै जाँदा खुद्रा लडाइँहरु हुन थाले । इष्ट इन्डिया कम्पनी तिब्बतमा व्यापार गर्न चाहन्थ्यो । तर, पूर्वमा टिष्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्म नेपालले तिब्बतलाई ढाकेको थियो । उनीहरु तिब्बत पस्न नेपाली भूभाग हात पर्नु अनिवार्य भयो । त्यसैले इष्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाललाई भारतजस्तै उपनिवेश बनाउन निणरयक लडाइँको घोषणा गर्‍यो ।
अंग्रेजले १८१४ नोभेम्बर १ देखि नेपालमाथि आक्रमण सुरु गरे । नेपाल(अंग्रेजबीच पाँचवटा किल्लामा लडाइँ भयो, महाकालीपारिका दुई र महाकाली पूर्वका तीनवटा । महाकालीपूर्व नेपालले आफूलाई अडिक राख्यो । अंग्रेज छिर्नै सकेनन् । पश्चिमपट्टकिो लडाइँ भने नेपालले हार्‍यो ।
यता पूर्वतर्फ नेपाल टिस्टादेखि ७० किलोमिटर पूर्व नगरकट्टासम्म पुगिसकेको थियो । सिक्किमको तीन चौथाइ भाग नेपालतर्फ थियो । अंग्रेजले नेपालविरुद्धको लडाइमा सिक्किमका राजाले सघाएमा उनलाई सिक्किमको गुमेको भाग फिर्ता गरिदिने वचन दिएको थियो । यता नेपालगञ्ज साइडपट्टि अवध भन्ने राज्यको नवाबसित उनीहरुले युद्ध लड्नका लागि दुई वा तीन करोड भारु ९कुनै किताबमा दुई र कुनैमा तीन करोड लेखिएको छ० ऋण लिएका थिए । नेपालसित युद्ध जितेर उक्त रकम वापतको जमीन अवधलाई दिने समझदारी भएको थियो ।
सुगौली सन्धीका कतिपय ठाउँमा बेलायत सरकार र कतिपय ठाउँमा इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेर लेखिएको छ । तर, यसलाई हामीले बेलायत सरकारसितकै सम्झौता भनेर बुझ्नुपर्छ, किनकि इष्ट इन्डिया कम्पनी भनेको सरकारले नै एउटा ऐनअन्तरगत बनाएको कम्पनी हो । त्यसैले यो सन्धीको जवाफदेही बेलायत सरकार नै हुनुपर्नेमा द्विविधा छैन । नेपाललाई अहिलेसम्म बिझाइरहने एउटा दुखान्त परिघटनाका लिन सकिन्छ सुगौली सन्धीलाई । पूर्वमा नेपालको टाउको छिनाएजस्तो भयो भने पश्चिममा पनि घुँडासम्म काटियो ।
अर्को कुरा, गोर्खालीलाई हातमा लिन सकेमा आफ्नो साम्राज्य विस्तारमा ठूलो सघाउ पुग्ने उसको आँकलन रह्यो । यही आशयले नै सुगौली सन्धीको एउटा धारामानेपालीहरु ब्रिटिश आर्मीमा भर्ना हुन सक्नेछन् भनिएको छ । यिनै दुवै कारणले हुन सक्छ, बेलायतले नेपालसित सम्बन्ध सुधार गर्न चाह्यो र यसैका निम्ति उसले पठायो कोशीदेखि राप्तिसम्मको तराई फिर्ता गर्ने प्रस्ताव । सन् १८१६ को डिसेम्बर ८ मा नेपालको ठूलो जमीन गुमेकोमा दुखमनाउ समेत गरी टोपलेर पठाएको प्रस्ताव स्वीकार्दै नेपालका राजाले तीन दिनपछि ११ तारिखमा स्वीकारोक्तिसहित जवाफ पठाए ।
जंगबहादुरले तुरुन्तै जवाफ दिए, ‘गुमेको भूमि फिर्ता चाहन्छु ।’ सुरुमा सकारात्मक जवाफ दिए पनि पछि उनीहरुले चारवटा जिल्लामात्रै फिर्ता गरे, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर । यस विषयमा १८६० मा सन्धी भयो । यसरी बल्ल हालको नक्सा अनुसार मेचीदेखि महाकालीसम्मको नेपाल तयार भएको हो ।नेपाल विस्तार हुँदा यसको क्षेत्रफल २ लाख ४ हजार ९ सय १७ वर्ग किलोमिटर थियो, भने अहिलेको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर छ । पछि फिर्ता आएको बाहेक सुगौली सन्धीबाट हामीले झण्डै ६० हजार वर्ग किलोमिटर माटो गुमायौं ।
जुद्धशम्शेरका पालामा दोस्रो विश्वयुद्ध भयो । फेरि त्यसमा पनि गोर्खालीको योगदानलाई कदर गर्दै बेलायतले पहिला दिने गरेको रकममा १० लाख रुपैयाँ थपिदियो । यसरी नेपालले वर्षेनी बेलायतबाट २० लाख रुपैयाँ पाउन थाल्यो । अर्थविद रामेश्वर खनालले केहि समयअघि एउटा अन्तरवार्तामा २०१५र१६ सालसम्म पनि त्यो पैसा आउने गरेको बताएका छन् । यद्यपि, त्यो रकम राणाहरुको व्यक्तिगत खातामा जम्मा हुने गरेको पनि बताइन्छ ।
अहिलेको इन्डिया जुन रुपमा छ त्यो भारतीयहरुले नभएर ब्रिटिशहरुले बनाइदिएको हो । अर्थात् भारतको एकिकरण नै उनीहरुले गरिदिएका हुन् । ब्रिटिश आउनुअघि त्यहाँ ६ सय ३० वटा भन्दा बढी राज्य थिए । त्यसलाई एक(एक गर्दै समेटेको ब्रिटिशले हो ।
गुमेको भूमि फिर्ता लिने मौका नेपालले राणाकालमा नपाएको होइन । तर, राणाहरुले मौकामा चौका हान्न चुके । भारत र पाकिस्तानलाई स्वतन्त्र बनाएर ब्रिटिशहरु जाने भएपछि दार्जिलिङबाट डमरसिंह गुरुङ राणाहरुसमक्ष प्रस्ताव लिएर आए । उनले राणाहरुलाई भने, ‘ब्रिटिशहरु जाँदैछन्, अब दार्जीलिङलाई नेपालमा मिलाउनुपर्छ ।’
पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्मका भूमिलाई हामीले ग्रेटर नेपाल भन्ने गरेका छौं । मेचीदेखि टिस्टा र महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूमिमा अहिले पनि नेपालको हक लाग्छ भन्ने दावी हाम्रो छ । यो भावनात्मक कुरा मात्रै होइन । हामीसँग ठोस आधारहरु छन् त्यतिबेला कांग्रेस राणाविरुद्ध लडिरहेको थियो । गुरुङले कांग्रेसलाई पनि सुझाव दिए, ‘अहिले राणाविरुद्धको लडाइँमा ध्यान नदिएर पहिले जमिन फिर्ता लिनुस । जमिन फिर्ता आएपछि हामी २५ हजार भूपू गोर्खाले राणाहरुलाई एक दिनमै पल्टाइदिन्छौं ।’
यो कुरा वीपी कोइरालाले नेहरुसित राखे । त्यसपछि नेहरुले राणाहरुलाई कस्न थाले । ‘भारतको बैंकमा रहेको तिमीहरुको पैसा रोकिदिन्छु’ भन्नेसम्मको चेतावनी दिए यद्यपि, राणाहरुले यस विषयमा कुराकानी गर्न तुल्सीमेहरलाई महात्मा गान्धीकहाँ पठाएका थिए । गान्धीले भने, ‘ठीक छ, जमीन तपाईंहरुको हो माग्न सक्नुहुन्छ । तर, ब्रिटिशलाई धपाउने आन्दोलनमा सरिक भएको नेपालीले तपाईंहरुलाई बाँकी राख्दैन भन्ने चाहिँ सोच्नुभएको छ कि छैन रु’ भारतका स्वतन्त्रता आन्दोलनमा थुप्रै नेपालीहरु पनि संलग्न थिए । उनीहरुलाई देखाएर गान्धीले घुमाउरो चेतावनी दिएका हुन् । आफ्नो शासनसत्ता गुम्ने भयका कारण अन्ततः राणाहरुले आफ्नो देशको भूभाग फिर्ता गर्ने प्रयासलाई जोडदार रुपमा नउठाएको देखिन्छ ।
१. नेपाल लडाइँ हारेर बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको हो । उपनिवेश नै खारेज भइसकेपछि सम्वन्धित भूभाग सम्वन्धित देशले फिर्ता पाउनु सामान्य तर्कशास्त्रको कुरा हो । बेलायतले लडाइँमा हराएर नेपालको भूमि हत्यायो । तर, अहिले नेपालको भूमि बेलायतसित नभएर भारतसित छ । एउटा देशसित हारेको जमीन अर्को देशमा गाभिने कुरा कसरी जायज हुन्छ रु यो विषय अहिले पनि हामी बेलायतसित उठाउन सक्छौं ।
२. भारतमा ब्रिटिश आउनुअघि पाकिस्तान बेग्लै देश थिएन । भारतीय उपननिवेशकै अंग थियो । तर, उसले लडाइँ लडेर छुट्टै देशको हैसियत प्राप्त गरी छाड्यो । हुँदै नभएको देश खडा गरेर जान सक्ने बेलायतले नेपालको भूभाग नेपाललाई किन फिर्ता दिन सकेन रु भारत आफैंले दुई सय वर्षदेखि पोर्चुगलको उपनिवेशका रुपमा रहेको गोवा फिर्ता लिएको होइन । भने, बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको नेपालको भूभाग किन फिर्ता दिदैन । भारतसित हामीले प्रश्न सोध्न सक्छौं ।
यसको अर्थ सुगौली सन्धीलाई पनि १९५० को सन्धीले खारेज गरिदिएको छ । जून सुगौली सन्धीबाट नेपालले आफ्नो जमिन ब्रिटिशलाई सुम्पेको थियो, त्यही खारेज भएपछि जमीन नेपालले फिर्ता किन नपाउने रु यही सन्धिमा आप्mनो पक्षमा भएका धारा ६(७ चैं भारतले उपभोग गरिरहने । आठौं धारा चैं लागू गर्न नपर्ने रु
सिक्किम भारतमा पछि गाभिएको राज्य हो । त्यसमा पनि नेपालको पुरापूर हक लाग्छ । कसरी त रु इतिहासमा जाउँ । विश्वका पुराना देशहरुको सूचीमा नेपाल पर्छ । त्यो सुचीमा भुटान र सिक्किम छैनन् । जब हामी पुनः एकीकरणको प्रक्रियामा थियौं, त्यतिबेला बाइसे र चौबिसे जस्ता ससाना टुक्रामा विभाजित देशहरु थिए । ती सबैमा राजा थिए । सिक्किम त्यस्तै एउटा देश हो ।
पुनएकीकरणका क्रममा हामीले सिक्किमको दुई तिहाइ भाग आफ्नो पक्षमा पारेका हौं । नेपालले युद्ध हारेपछि ब्रिटिसले आफ्नो टेरिटोरी र नेपालका बीचमा ‘बफर स्टेट’का रुपमा सिक्किमलाई हालिदिए । २०१७ मा सिक्किम र अंग्रेजबीच टिटालिया सन्धी भएको थियो । उक्त सन्धीमा ‘नेपालसित लिएको जमीन तिमीलाई दिएका छौं’ भनेर प्रष्ट लेखेको छ । यसको मतलब सिक्किम पहिले नेपालकै अधीनमा थियो भन्ने स्वीकारोक्ति हो ।
ब्रिटिश उपनिवेश हटेपछि चोग्यालकी अमेरिकन रानी होप कुकले दार्जिलिङ सिक्किमको अधिनमा रहनुपर्ने भन्दै भारत सरकारलाई स्मरणपत्र लेखिन् । ‘ब्रिटिशलाई आराम गर्न र स्वाथ्योपचारका लागि मात्रै आफ्नो भूभाग दिएको’ र यसको सार्वभौमसत्ता सिक्किमसँगै रहेको भनेर लेखहरु पनिलेखिन् । यसबाट भारत सशंकित मात्र बनेन, चोग्यालप्रति आगो भयो ।
म विद्यार्थी छँदा ६/७ कक्षामा नेपालको सामान्य इतिहास पढ्नुपर्थ्यो । त्यसमा नेपाल र अंग्रेजको युद्धको बारेमा चर्चा गरिएको थियो । गुरुले पढाउँदा भन्नुहुन्थ्यो, ‘हाम्रो भूमि ब्रिटिशले यसरी लगे ।’ यो सुन्दा मेरो शरीरमा काँडा उम्रिन्थ्यो ।
सुवास घिसिङले ‘हामी हजुरकै प्रजा हौं’ भन्दै राजा वीरेन्द्रलाई स्मरणपत्र लेखे । यस विषयमा केही भारतीयले राजीव गान्धीलाई उजुरी गरेका थिए । राजीव गान्धीले ‘आफ्ना राजालाई यति भनिहाल्छन् नि’ भन्ने जवाफ दिएर पठाए । यस्ता कुराहरुले मेरो मन छोयो । मलाई लाग्यो कि उनीहरु नेपालमा गाभिन चाहन्छन्, तर नेपालले लिन चाहिरहेको छैन ।
तीन वर्षअघि हामीले बेलायतकी महारानीलाई स्मरणपत्र पठायौं । स्मरणपत्र बुझाउन जाँदा बेलायती राजदूतसित मेरो कुराकानी भयो । उनले भने, ‘यो जमीन त इन्डियासित छ, हामी के गर्न सक्छौं र रु’ त्यसपछि मैले बेलायतको इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स एक्ट र १९५० को सन्धीका विषयमा उनलाई अवगत गराएँ । त्यसपछि उनी गम्भीर भएँ । आखिरमा जवाफ दिए, ‘यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानुपर्ने रहेछ । तपाईहरु आआफ्नो सरकारमार्फत लड्दा राम्रो हुन्छ ।’
म ०५४ सालमा म कान्तिपुरको विचार पृष्ठ हेर्थेँ । त्यतिबेला माधव घिमिरेले एउटा राष्ट्रिय गीत लेखेका थिए । गीतका चार पंक्ति यस्ता थिए स्
पश्चिम किल्ला काँगडा पूर्वमा टिष्टा पुगेथ्यौं
शिवले यहीँ ल्याएथे सृष्टिको पहिलो विहान
त्यतिबेला म कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीय पृष्ठमा काम गर्थेँ । खोजी गर्द जाँदा भारतीय राजदूतले दरवारका सचिव नारायण श्रेष्ठलाई भनेर घिमिरेको गीति संग्रह किन्नर(किन्नरीबाट समेत यी चार पङ्ति मेटाउन लगाएका रहेछन् । यो विषयमा मैले कान्तिपुरमा एक लेखमार्फत प्रश्न उठाएँ । हाम्रो इतिहास मेटाउन खोज्ने को रु भन्ने शीर्षकमा लेखिएको उक्त लेख निकै प्रभावशाली सावित भयो । त्यतिबेला कान्तिपुर निकै शक्तिशाली पनि थियो । फलस्वरुप, हटाइएका यी पङ्तिहरु पछि जोडिए ।
कान्तिपुरमा काम गर्दा मैले ग्रेटर नेपालका विषयमा धारावाहिकरुपमा ५७ वटा लेख लेखेको छु । ५६ औं लेख छापिने क्रममा मलाई एउटा फोन आयो । विजयमणि आदिका नामबाट । मैले नचिनेका व्यक्ति थिए । उनले मलाई सुनाए, ‘आज तिम्रो विषयमा एम्बेसीमा मिटिङ बस्यो । अब एक दुई(दिनमा तिम्रो लेख बन्द हुन्छ ।’
त्यसको तीन/चार दिनपछि प्रकाशक हेमराज ज्ञवालीले मलाई बोलाए । ‘तपाईंले राम्रो कुरा उठाउनुभएको हो,’ उनले सम्झाए, ‘तर चिनी पनि धेरै खायो भने तीतो हुन्छ । त्यसैले अब यो श्रृंखला बन्द गरौं ।’ त्यसपछिको एक अंक छापियो, अनि बन्द भयो । केही समयपछि मैले कान्तिपुर छाडेँ ।
ग्रेटर नेपाल अभियानका क्रममा मैले समानान्तर रुपमा धाक(धम्की र आर्थिक प्रलोभन पाइरहेको छु । सौभाग्यवस यी दुवैले मलाई अहिलेसम्म छुन सकेका छैनन् ।
राकेश सुद राजदूत हुँदा एक चिजानका पत्रकारले मलाई सद्भावनाका एक नेतालाई भेट गराए । ती नेता पछि मन्त्री पनि भए । उनले मलाई ठाडै पैसाको अफर गरे । इन्डियन एम्बेसीले उनलाई मसित भेट्न अह्राएका रहेछन् । ती नेता मिडियटर हुन खोजेका थिए । दोस्रोपटक त्यसको एक वर्षपछि राकेश सुद आफैंले भेट्न खोजेको सन्
“आज पृथ्वीनाराण शाहको इतिहास मेटाइए भोलि हाम्रो इतिहास पनि मेटिने पक्का हो,”
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पृथ्वीनारायण शाहको ...
तेस्रोलिङ्गी भूमिका श्रेष्ठको आत्मकथाः विश्वका लागि नयाँ सन्देश
विवेकशील साझा पार्टी फुट्यो, दुई सांसद नयाँ पार्टीतिर
विश्वकै धनी दम्पतीले किन गर्दै छन् सम्बन्धबिच्छेद?
प्रधानसेनापति भारत प्रस्थान
राष्टपति भण्डारीद्वारा पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा माल्यार्पण
रक्सीले मातेर अफिस आउने सरकारी कर्मचारीको चर्तिकला, प्रहरी पनि दिक्क(भिडियो )
पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती मनाइँदै, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट प्रशंसा
राज्यकोषबाट धमाधम करोडौँ बाँडिँदै, सरकार निकटको खल्तीमा लाखौं
आबुधाबीमा १५० नेपाली बिचल्लीमा, सात महिनादेखि तलबविहीन